Bianco-Prodécid : atao izay hampangarahara ny fitantanan’ny kaominina | NewsMada
Bianco-Prodécid : atao izay hampangarahara ny fitantanan’ny kaominina
“Lafin-javatra efatra ny fiaraha-miasa amin’ny tetikasa Prodécid: fanatsarana ny famatsiam-bola eny anivon’ny kaominina, fanetsehana ny fiharian-karena, fanatsarana ny fitantanan-draharaha, fiaraha-miasa amin’ireo rafitra mahakasika ny fitsinjaram-pahefana toy ny distrika, FDL… “
Izay ny fanazavan’ny tale lefitry ny tetikasa Fampandrosoana ny kaominina sy ny fitsinjaram-pahefana (Prodécid), Randrianitovina Parfait, tamin’ny fampahafantarana ny fanombohan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Bianco sy ny Prodécid, teny Antaninarenina, omaly, ho an’ireo kaominina folo, faritra Analamanga.
Dimy volana ny faharetan’ny tetikasa, iarahana amin’ny Fiaraha-miasa alemà (GIZ). Nandray anjara tamin’ny atrikasa ny ben’ny Tanàna, ny filohan’ny mpanolotsain’ny Tanàna, ny avy amin’ny firaisamonia sivily. Hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ny kaominina 20 amin’ny faritra Diana, 15 amin’ny faritra Boeny, 20 amin’ny faritra Analamanga.
Be ny fitarainana momba ny kolikoly eny amin’ny kaominina
“Mbola betsaka ny fitarainana momba ny ahiahy kolikoly eny anivon’ny vondrombahoakam-paritra na ny kaominina”, hoy ny talem-paritry ny Bianco, Antananarivo, ny Jly Ratovoson Benjamin Arthur. Raha eo imason’ny vahoaka, mbola misy fitarainana voaray momba ny kolikoly na ny fandoavan-ketra, na ny fitantanan-draharaha, na ny fampandrosoana eny anivon’ny kaominina.
Amin’ny tolo-draharaha omen’ny kaominina ho an’ny vahoaka, hapetraka ny fenitr’asa: fangaraharana amin’ny fitantanana, ametrahana fepetra sy fomba fiasa. Hanaraka ny toromarika sy handray anjara mavitrika amin’ny fitantanana ny kaominina ny olom-pirenena: fanadihadiana na fanaraha-maso amin’ny fahalalana ny fitantanam-bola, ohatra.
Mpitantsoroka fa tsy mpiahy ny kaominina ny fanjakana
Mpitantsoroka ny kaominina ny minisiteran’ny Atitany, fa tsy mpiahy intsony: tsy afa-mitsabaka amin’ny raharahan’ny kaominina ny minisitera, raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fitsinjaram-pahefana eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, Rakotonirina Gervais.
Anisan’ny nifidianana ireo kaominina hanombohana ny tetikasa ny fahazoany manetsika ny ara-bola, ohatra, ny fahazoany manao ezaka hanatsara ny toekarena…